Japan जापानमा सर्वश्रेष्ठ मनोरञ्जन पार्क र थीम पार्क! टोक्यो डिस्ने रिजोर्ट, युएसजे, फुजी-क्यू हाइलैंड ... - Best of Japan
HWwarts महल मा USJ = शटरस्टक
जापानमा विश्वका शीर्ष थिम पार्क र मनोरन्जन पार्कहरू छन्। ओसाका र टोकियो डिज्नी रिजोर्टमा युनिभर्सल स्टुडियो जापान विशेष गरी प्रख्यात छन्। यसका अतिरिक्त, म स्पटहरू पनि प्रस्तुत गर्दछु फुजी-क्यु हाइल्यान्ड जुन तपाईंले माउन्ट हेर्दा खेल्न सक्नुहुन्छ। फुजी
टोक्यो डिस्ने रिसोर्ट (TDR)
नागाशिमा स्पा भूमि
युनिभर्सल स्टुडियो जापान
टोकियो डिज्नील्याण्डमा = शटरस्टकमा जादू इलेक्ट्रिकल परेड ड्रीम लाइटहरू
टोक्यो डिज्नी रिसोर्ट को नक्शा
टोक्यो डिस्नेल्याण्ड, टोक्यो डिस्नेसी, र वन्डरफुल होटेलहरू
टोकियो डिज्नी रिजोर्ट जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय थिम पार्कहरू जुन उर्यासु शहर, चिबा प्रान्त, टोकियोको पूर्वमा अवस्थित छ। यो लगभग २१ मिनेट टोक्यो स्टेशन बाट JR Keiyo लाइन द्वारा, र Shinjuku स्टेशन बाट लगभग Tok 21 मिनेट टोक्यो स्टेशन मार्फत छ।
टोकियो डिस्ने रिजोर्टसँग दुई थिम पार्कहरू छन्, टोकियो डिस्नेल्याण्ड (TDL) र टोक्यो डिस्नेसा (TDS)। थिम पार्क पछाडिको directly वटा सिधा व्यवस्थित होटलहरू छन्। डिज्नी एम्बेसेडर होटेल, टोकियो डिस्नेसा होटल मिराकोस्टा, टोक्यो डिस्नेल्याण्ड होटेल, टोकियो डिज्नी सेलिब्रेशन। त्यहाँ शपिंग मल्ल पनि छ। एक मोनोरेल थिम पार्क बीचमा चल्छ।
जब तपाईं टोकियो डिज्नी रिजोर्टमा जानुहुन्छ, तपाईं वाल्ट डिस्ने फिल्महरूको संसारमा प्रवेश गरेको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ। सीधा स्वामित्व प्राप्त होटेलहरू, थीम पार्कहरू जस्तै, सुन्दर ढंगले बनाइएको छ ताकि अतिथिहरूले कल्पना संसारबाट आनन्द लिन सक्दछन्। प्रत्यक्ष संचालित होटेलहरूमा, टोकियो डिस्नेसा होटल मिराकोस्टा विशेष लोकप्रिय छ किनकि पाहुनाहरूले केही कोठाबाट टोकियो डिस्नेसीका घटनाहरू देख्न सक्छन्। होटल MiraCosta मा कोठा बुक गर्न धेरै गाह्रो छ।
टोकियो डिस्नेल्यान्ड र टोकियो डिस्नेसा बीचको भिन्नता
तपाईं टोकियो डिस्ने ल्याण्ड र टोकियो डिस्ने समुद्री बीचको सर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं टोकियो डिस्ने रिसोर्ट लाइन, जापान = शटरस्टकमा सवारी गर्नुहुन्छ
चरित्र सडक परेड डिज्नी सागर टोक्यो, जापान = शटरस्टकमा सबै आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दै
जब तपाईं टोकियो डिस्ने रिसोर्टमा जानुहुन्छ, तपाईं टोकियो डिस्नेल्यान्ड वा टोकियो डिस्नेसाइमा खेल्ने कि घाँटीमा हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म टोकियो डिस्नेल्यान्ड र टोकियो डिस्नेसिया बीचको भिन्नताहरू बिभिन्न कोणबाट वर्णन गर्ने छु।
लक्ष्य उमेर समूह
जबकि टोक्यो डिज्नेल्याण्डले बच्चाहरूलाई प्रमुख पाहुनाको रूपमा लिन्छ, टोकियो डिज्नेसा मुख्यतया वयस्कहरूलाई लक्षित गर्दैछ। टोकियो डिज्नेल्याण्डले सबैमा रक्सी बेच्दैन, तर टोकियो डिज्नेसा रेस्टुराँमा मदिरा प्रस्ताव गर्दछ। जबकि टोक्यो डिज्नेल्यान्डले बच्चाहरूलाई प्रमुख पाहुनाको रूपमा लिन्छ, टोकियो डिज्नेसा मुख्यतया वयस्कहरूलाई लक्षित गर्दैछ। टोक्यो डिज्नी ल्यान्डले सबैमा रक्सी बेच्दैन, तर टोकियो डिस्नेसा रेस्टुराँमा मदिरा प्रस्ताव गर्दछ। त्यहाँ धेरै भवनहरू छन् जुन टोकियो डिज्नी ल्यान्डमा रमणीय परी कथा संसारको छवि गर्दछन्, जबकि टोकियो डिस्नेसासँग धेरै फेसनल भवनहरू छन् जसले तपाईंलाई विदेशी वातावरण महसुस गराउँदछन्।
टोक्यो डिस्नेल्याण्डमा, परेडहरू प्राय: आयोजित गरिन्छ, तर टोकियो डिज्नेसामा परेड गरिन्छ।
प्रत्येक दिन शो या त टोकियो डिस्नेल्यान्ड वा टोकियो डिस्नेसीमा आयोजना गरिन्छ। टोक्यो डिस्नेसीमा, पार्क पार्कको बीचमा तालमा आयोजित हुन्छ।
दुर्भाग्यवस, दुबै भीड छन्। लोकप्रिय आकर्षणहरूको आनन्द लिन तपाईंले लाइनमा लगाउनुपर्नेछ।
यद्यपि सापेक्ष दृष्टिकोणबाट यो भन्न सकिन्छ कि टोकियो डिस्नेल्याण्ड टोकियो डिस्नेल्याण्ड भन्दा धेरै भीडले भरिएको छ। टोकियो डिस्नेल्याण्डमा धेरै आकर्षणहरू छन्, त्यसैले पाहुनाहरू तितरबितर भएका छन्।
टोक्यो डिज्नेल्याण्डमा, तपाई अपेक्षाकृत चाँडो आकर्षणको मजा लिन सक्नुहुनेछ, विशेष गरी जब परेडहरू आयोजित गरिन्छ। यदि यो लोकप्रिय आकर्षण होईन भने, तपाईंले लाइन अप गर्न आवश्यक पर्दैन।
टोक्यो डिस्नेल्यान्डको १० सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू
टोकियो डिस्नेल्याण्डलाई सात विषयवस्तुहरू द्वारा विभाजित गरिएको छ, र प्रत्येक क्षेत्र विषयवस्तुसँग मिल्ने आकर्षणहरू छन्। यदि मैले टोकियो डिस्नेल्यान्डमा लोकप्रिय आकर्षणहरू क्रमबद्ध फारममा प्रस्तुत गर्दछु भने, यो निम्नानुसार हुनेछ।
न। १: स्प्याश माउन्टेन
ती मध्ये सब भन्दा लोकप्रिय "स्पलैश माउन्टेन" हो जहाँ पाहुनाहरू डु boat्गाका साहसिक यात्रामा छन्।
No.2: राक्षसहरू, Inc: यात्रा गर्नुहोस् र खोज्नुहोस्!
आकर्षण "दानवहरू, ईंक: राइड एण्ड गो सीक!", जहाँ पाहुनाहरूले "राक्षस, Inc" फिल्ममा देखा पर्ने प्यारा राक्षसहरूको खोजी पनि धेरै लोकप्रिय छ।
No.3: ठूलो थन्डर माउन्टेन
बिग थन्डर माउन्टेन एउटा आकर्षण हो जुन अतिथिहरू रोलर कोस्टरमा फोहोर खानीबाट पार हुन्छन्। अधिकतम गति करीव kil० किलो छ, तर यो अँध्यारोमा चल्छ, त्यसैले यो धेरै रोमाञ्चक र रमाईलो छ।
टोकियो डिस्नेल्याण्डको शीर्ष दशमा अरू आकर्षणहरू
टोक्यो डिस्नेल्याण्डमा, म सिफारिस गर्न चाहन्छु त्यहाँ त्यहाँ धेरै अन्य आकर्षणहरू छन्। म फेरि उनीहरूको बारेमा नयाँ लेख लेख्न चाहन्छु। यहाँ, म क्रमबद्ध ढाँचामा आकर्षणहरूका नामहरू मात्र गणना गर्ने छु।
No.4: बज लाईटयरको एस्ट्रो ब्लास्टर
न। P: पूहको हनी हन्ट
न।:: स्पेस माउन्टेन
न।:: यो सानो संसार हो
न।:: पिटर पानको उडान
न।:: मिकीको फिलहर जादू
न। १०: प्रेतवाधित हवेली
टोक्यो डिस्नेसाइका १० सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू
अर्को, म टोकियो डिस्नेसाईको लोकप्रिय आकर्षणहरू निम्न क्रमबद्ध ढाँचामा निम्नसँग परिचय गर्दछु।
No.1: खेलौना कहानी उन्माद!
फिल्म "टोय स्टोरी" मा देखा पर्ने वुडीको ठुलो मुखमा छिर्दा तपाईं अचानक सानो हुनुहुनेछ र वुडीजस्तो साहसिक कार्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं थ्रीडी गिलास लगाउन सक्नुहुन्छ, ट्राम सवारी गर्न सक्नुहुन्छ र शूटिंग खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
No.2: पृथ्वीको केन्द्र को यात्रा
पृथ्वीको केन्द्रको यात्रामा, तपाईं भूमिगत विश्व अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं एक अद्वितीय भूमिगत सवारीमा चल्नुहुन्छ र अँध्यारोमा सर्नुहुन्छ, अचानक नजिकैको ज्वालामुखीले बल्नेछ।
No.3: आतंक को टावर
यस आकर्षणमा तपाईसँग १ 1912 १२ मा न्यु योर्कको समय यात्रा हुनेछ। तपाई पुरानो होटेलमा जानुहुनेछ "डरलाग्दो होटल"। जब तपाईं लिफ्टमा सवारी गर्नुहुन्छ र माथिल्लो तलामा जानुहुन्छ, एकदमै रोमाञ्चकारी विश्व तपाईंको प्रतीक्षा गर्दैछ।
टोकियो डिस्नेसाईमा शीर्ष दशमा अरू आकर्षणहरू
No.4: कछुवा कुराकानी
No.5: भेनिस gondolas
न।:: रिसिंग स्पिरिट्स
न।:: जादुई दीपक थियेटर
8: इंडियाना जोन्स साहसिक
न।:: समुद्र अन्तर्गत २०,००० लीगहरू
न। १०: मरमेड लगून थियेटर
टोक्यो डिस्ने रिसोर्टको आधिकारिक वेबसाइट तल छ। यस साइटमा, तपाईं टोकियो डिस्ने रिसोर्ट आकर्षणहरू र होटल मिराकोस्टा जस्ता डिस्ने होटेलहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस साइटमा पनि होटल आरक्षण गर्न सिफारिस गर्दछु।
>> टोक्यो डिज्नी रिसोर्टको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
फुजी- Q हाईलैंड को नक्शा
किन तपाई माउन्ट देख्नुहुन्न? यस मनोरञ्जन पार्कबाट फुजी?
Fuji-Q Highland एक मनोरंजन पार्क हो जुन पर्वत फुजीको फेदमा अवस्थित छ। तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यस मनोरञ्जन पार्कमा तपाईंको अगाडि फुजी। किनकि यहाँ प्रवेश नि: शुल्क छ, जब तपाईं माउन्टको वरिपरि घुम्नुहुन्छ। फुजी, तपाई आफ्नो रुचि को आकर्षण को कुशलतापूर्वक अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
फुजी-क्यू हाइलैंडमा तपाईले धेरै कट्टरपन्थी रोलर कोस्टरहरूको अनुभव लिन सक्नुहुन्छ। यसका साथै यस मनोरञ्जन पार्कमा प्रेतवाधित घर एकदम डरलाग्दो छ। थप रूपमा, त्यहाँ साना बच्चाहरूको लागि "थॉमस र फ्रेन्ड्स" को थिम पार्क पनि छ। तपाईं आफ्नो बच्चाको साथ लोकोमोटिव थोमा चढ्न सक्नुहुन्छ।
फुजी-क्यू हाईल्याण्ड पनि फुजीक्यू हाइल्यान्डको रूपमा लेखिएको छ। "फुजिक्यू" प्यारेन्ट कम्पनी फुजिक्यू रेलवेबाट आउँदछ।
रोलर कोस्टरहरू जस्तै "FUJIYMA" "डोडोन्डपा" लोकप्रिय छन्
त्यहाँ चार विशेष गरी रेडिकल रोलर कोस्टरहरू फुजी-क्यू हाइलैंडमा छन्। म प्रत्येक YouTube भिडियो तल राख्छु, त्यसैले कृपया यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने ती भिडियोहरूमा एक नजर राख्नुहोस्।
FUJIYAMA: आकर्षण को रोलर Coasters को राजा भनिन्छ
फुजी क्यू हाईल्याण्डमा जहाँ धेरै रोलर कोस्टरहरू छन्, "फुजीमा" सबैभन्दा लोकप्रिय कोस्टर हो। अधिकतम हेड ड्रप 70 मीटर छ। तपाईं भवनको २० औं तलाबाट तल झर्दै गरेको थ्रिल अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
DoDoDonpa: १. 180 seconds सेकेन्ड भित्र १ 1.56० किमी / घन्टामा द्रुत गर्नुहोस्!
"डोडोन्डोपा" फुजी-क्यू हाइलैंडमा सबैभन्दा नयाँ रोलर कोस्टर हो। यो रोलर कोस्टर १. 180 सेकेन्ड भित्र १ 1.56० किलोमिटर प्रति घण्टाको वेग हुन्छ। तपाईं विश्वको सब भन्दा छिटो त्वरण अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
EEJANAIKA: तपाईंको शरीर फेरि र फेरि पल्टन्छ
यस रोलर कोस्टरको सीट चलिरहेको बेला धेरै घुमाउछ। तपाईं फ्लोटिंग को डर अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
ताकाबिशा: अधिकतम खसेको कोण १२१ डिग्री छ!
अधिकतम १२१ डिग्रीमा झर्ने कोण एक विश्व कीर्तिमानको रूपमा प्रमाणित छ, र अझै पनि विश्वको सर्वश्रेष्ठ घमण्ड गर्दछ। तपाई पूरै खस्ने डरको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
>> Fuji-Q Highland को विवरणका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
रातो दृश्य ड्रलर टावरको रोलर कोस्टरसँग स्टिल ड्र्यागन २००० र सर्दमा स्पष्ट रातको आकाश नागाशिमा स्पा जग्गा मनोरंजन पार्कमा पृष्ठभूमिको रूपमा = शटरस्टक
नागाशिमा स्पा भूमि को नक्शा
प्रसिद्ध आउटलेट मल निकट छ
नागाशिमा स्पा भूमि माई प्रान्तको एक मनोरञ्जन पार्क हो। यो लगभग minutes० मिनेटको दूरीमा नागोया स्टेशनबाट सिधा बसबाट। यो मनोरञ्जन पार्क सामान्य रिसोर्ट "नागाशिमा रिसोर्ट" को अंश हो। यस मनोरञ्जन पार्कको थप बाहेक, नागाशिमा रिसोर्टसँग एक आउटलेट मल "मित्सुई आउटलेट पार्क ज्याज ड्रीम नागाशिमा" र धेरै तातो वसन्त होटेलहरू छन्। नजिकै, त्यहाँ एक प्रसिद्ध फूल बगैचा "नबाना नो साटो" सुन्दर प्रकाशको साथ छ।
त्यहाँ १० भन्दा बढी रोलर कोस्टरहरू छन्!
नागाशिमा स्पा ल्याण्ड, जस्तै फुजी - क्यू हाइलैंड, धेरै धेरै कट्टरपन्थी रोलर कोस्टरहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ १० भन्दा बढी रोलर कोस्टरहरू छन्।
इस्पात ड्रैगन २०००: विश्वमा एक उत्तम रोलर कोस्टरहरू मध्ये एक
नागाशिमा स्पा ल्याण्डको रोलर कोस्टरहरूमा सब भन्दा लोकप्रिय "को स्टिल ड्र्यागन २०००" कोस्टर हो। इस्पात ड्र्यागन २००० को कुल लम्बाई २2000 meters मिटर छ। यसको अधिकतम गति १ 2000 किमी / घन्टा छ। यसको अधिकतम गिरावट .2479 .153 ..93.5 मिटर छ। त्यहाँ विश्वभरि केहि रोलर कोस्टरहरू छन्।
एक्रोब्याट: तपाईं जिमनास्ट जस्तो देखिनुहुन्छ!
एक्रोब्याट एक अनौंठो रोलर कोस्टर हो। तपाईं एक्रोब्याटिक्स गर्ने जस्तै हावामा उत्कृष्ट नृत्य गर्नुहुनेछ। कृपया माथिको यूट्यूब भिडियोहरूमा एक नजर राख्नुहोस्।
यो रोलर कोस्टर "ARASHI" पनि धेरै विशिष्ट छ। जब तपाईं सिटमा बस्नुहुन्छ, यो रोलर कोस्टर पहिले तन्काउँदछ। त्यस पछि, यो कोस्टर स्ट्रिमको रूपमा चल्न सुरु हुनेछ। त्यस समयमा तपाईंको सिट घुमाउन थाल्छ। तपाईं रहस्यमय हवाई उडानको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
नाबाना कुनै शान्तोमा जाडो रोशनी सिफारिस गरिएको छ!
यदि तपाइँ जाडोमा नागाशिमा स्पा रिसोर्ट जानुहुन्छ भने कृपया नानबा न साटो न कुनै साटो सबै प्रकारले भ्रमण गर्नुहोस्। नाबाना नो साटो नागाशिमा स्पा रिसोर्टको रूपमा उही कम्पनी द्वारा संचालित हो। नाबाना नो साटोमा तपाईले जापानमा सब भन्दा राम्रो रोशनी देख्न सक्नुहुन्छ। यो रोशनी भर्खरै अक्टुबरको अन्तदेखि मेको शुरुवातमा आयोजित गरिएको छ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार नागाशिमा स्पा भूमिको छेउमा, त्यहाँ धेरै तातो होटलहरू छन्। ती मध्ये, होटल Hanamizuki एक धेरै विलासी होटल हो। वास्तवमा, यो क्षेत्र पहिलो पटक आफ्नो अद्भुत तातो स्प्रि forहरूको लागि प्रख्यात थियो र विभिन्न रिसोर्ट सुविधाहरूको निर्माण सुरु भयो। त्यसोभए, रोलर कोस्टरमा थ्रिल अनुभव गरेपछि के तपाईं यस होटलमा बस्नुहुन्न र तातो स्प्रि enjoyको आनन्द लिनुहुन्न?
होग्वर्ट्स, हेरी पॉटर जोन, USJ = शटरस्टक भिसाइ।
विश्वव्यापी स्टुडियो जापानको नक्शा
ह्यारी पॉटर, मिनियन, जुरासिक पार्क ...
"HAPPY MINION MART" पसल, Minion सामान बेच्न, यूनिभर्सल स्टुडियो जापान, ओसाका, जापानमा अवस्थित
युनिभर्सल स्टुडियो जापान (USJ) ओसाकामा अवस्थित विशाल थिम पार्क हो जुन जापानको टोकियो डिज्नी रिसोर्टको छेउमा लोकप्रिय छ। युएसजे विश्व युनिभर्सल स्टुडियो थिम पार्कहरूको माझमा एक सबैभन्दा सफल पार्क हो।
परिसरलाई हेरी पॉटर, मिनियन, जुरासिक पार्क, हलिवुड जस्ता themes थिमहरूमा विभाजित गरिएको छ। तपाईं वुडी, मिनियन, स्नुपी, हेलो किट्टी आदिलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक क्षेत्रमा टहलिरहँदा तपाईंले विभिन्न आकर्षणहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
USJ को १० सर्वश्रेष्ठ आकर्षणहरू
युनिभर्सल स्टुडियो जापान (USJ) का धेरै आकर्षण छ। ओसाका, जापान = शटरस्टक
USJ का धेरै आकर्षणहरू छन्। म तपाईंलाई उनीहरू बीचको निम्न आकर्षणहरूको सिफारिश गर्दछु। मलाई उनीहरूलाई क्रमबद्ध ढाँचामा परिचय दिनुहोस्।
न। १: हताश मी मिनियन मेहेम (हचमेचा सवारी)
२०१ 2017 मा, विश्वको सबैभन्दा ठूलो मिनी क्षेत्र "मिनियन पार्क" USJ मा खोलियो। ती मध्ये, "घृणित मी मिनियन मेहेम" धेरै लोकप्रिय छ। यस आकर्षणमा, तपाईं सिटमा बस्नुहुनेछ र ठूलो स्क्रिनमा देखाइने विश्वमा प्रवेश गर्नुहोस्। तपाईं minions संग क्रोधित हुनेछ। रोमाञ्चक अनुभवहरू जस्तै गहिराइमा गहिरो खस्यो तपाईंको लागि पर्खिरहेका छन्!
No.2: फ्लाइंग डायनासोर
USJ को जुरासिक पार्कमा यो आकर्षण वास्तवमै प्रभावशाली छ! तपाईलाई पोष्टरमा रोलर कोस्टरले हावामा उडाउने छ जुन पछाडि उडान डायनासोरले समातेको जस्तो देखिन्छ। रोलर कोस्टर ११1124२ मिटरको लम्बाई हो र स्ट्रोकमा अधिकतम .37.8 XNUMX..XNUMX मिटरको ड्यासमा खस्यो।
No.3: हलिवुड सपना - सवारी
जब तपाई युएसजे प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, पहिलो देखिने रोलर कोस्टर "हलिउड ड्रीम - द राइड" हो। यस रोलर कोस्टरमा, सिट उच्च स्थितिमा अवस्थित छ, त्यसैले सायद तपाईंको खुट्टा तल हुँदैन। त्यसो भए, जब रोलर कोस्टर चल्छ, तपाईं डर अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईं आकाशमा उडान गर्दै हुनुहुन्छ। सिटको पछिल्तिरबाट संगीत बज्दा, तपाईं संगीत सुन्न रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ।
No.4: ह्यारी पॉटर र निषेधित यात्रा
यो "ह्यारी पॉटर र निषेधित यात्रा" पनि धेरै लोकप्रिय छ। यस आकर्षणमा, तपाई हेरी पॉटरको जादुई संसारमा थ्रीडी चश्मा प्रयोग नगरी प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सीट हिंस्रक हल्लाउँछ। तपाईं आकाशमा उडान र आग जलेको अजि .्गरले आक्रमण गर्ने जस्ता अनुभवहरूको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ।
यस आकर्षणमा तपाईलाई विशाल शार्कले चोट पुर्‍याउँछ, १० मिटर लम्बाई, धेरै पटक। तपाईं पानीले छरपस्ट हुन सक्नुहुन्छ, कृपया सावधान रहनुहोस्।
युएसजेमा शीर्ष दसमा अन्य आकर्षणहरू
युनिभर्सल स्टुडियो जापानका अन्य धेरै रोचक आकर्षणहरू छन्। उत्तम दशमा प्रवेश गर्ने आकर्षणहरू निम्नानुसार छन्।
No.6: जुरासिक पार्क - सवारी ™
न।:: हिप्पोग्राफ Flight को उडान
न।:: स्पाइडर म्यानको आश्चर्यजनक एडभेन्चरहरू - सवारी KK8D
न।:: स्नूपीको महान रेस ™
न। १०: फ्लाइंग स्नुपी
Huistenbosch को नक्शा
"ह्विस टेन बॉश" जापानमा क्युशुको प्रतिनिधित्व गर्ने अद्भुत थिम पार्क हो। तर यो "जापान" होइन, यो "नेदरल्याण्ड्स" हो। जापानले पश्चिमी टेक्नोलोजी र संस्कृति नेदरल्याण्ड्सबाट सिकेका छ, अलग्गै युगमा समेत। यस लामो मैत्रीको कारणले, सासेबो, नागासाकी प्रान्तमा विशाल थिम पार्क खोलियो, जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ ...
नेदरल्याण्डको सुन्दर शहर दृश्यको आनन्द लिनुहोस्
हुइस टेन बॉशको मजा लिने तीन दृष्टिकोण
ह्युस टेन बॉश (HTB) क्युसुको दक्षिणपश्चिमी भागमा अवस्थित सासेबो शहर, नागासाकी प्रान्तको विशाल थिम पार्क हो। टोकियो डिस्ने रिसोर्टको परिसरमा १. 1.5 पटक, युरोपको शहर दृश्यहरू, विशेष गरी नेदरल्याण्ड, पुन: उत्पादन गरिएको छ। नेदरल्याण्डको सहयोगमा, परम्परागत डच शहर विश्वासीपूर्वक पुन: उत्पादन गरिन्छ। यदि तपाईं ह्विस्टेन बॉशमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जापानमा हुनुहुन्छ कि नेदरल्याण्ड्समा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अलमल्लमा पर्नुहुनेछ। तपाईं नेदरल्याण्ड्स को वास्तविक सडक को मजा लिन सक्नुहुन्छ।
जापान १ the औं शताब्दीदेखि १ th औं शताब्दीसम्म पाल्छ। यद्यपि त्यस समयमा जापानीहरूले नेदरल्याण्ड्ससँग नागासाकी हार्बरमा व्यापार गर्न जारी राखेका छन् र नेदरल्याण्डको टेक्नोलोजी र संस्कृतिको बारेमा पनि सिकेका छन्। पृष्ठभूमिमा कि हुइस टेन बॉश नागासाकी प्रान्तमा निर्माण गरिएको थियो, त्यस्तै इतिहास र सांस्कृतिक आदानप्रदान छ।
हुइस टेन बॉशको सब भन्दा ठूलो शक्ति यस सुन्दर शहर दृश्यको दृश्यमा निहित छ। तपाईं यस शहरलाई अर्को तीन ए from्गलबाट आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। म तलका प्रत्येक आईटमहरूको लागि सान्दर्भिक YouTube भिडियोहरू परिचय गराउनेछु। यदि तपाईं आपत्ति मान्नुहुन्न भने, कृपया उनीहरूलाई हेर्नुहोस्।
१. सुन्दर भवनहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस्
हुइस टेन बॉशको सडकहरू साँच्चै सुन्दर छन्। यदि तपाईं यस शहरको दृश्य पूर्ण रूपमा आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई यो शहरमा कम्तिमा १ रात बस्न सिफारिस गर्दछु। हुइस टेन बॉशले सिधा होटल संचालित गरेको छ। ती मध्ये, होटल यूरोपका तीन होटेल, होटल एम्स्टर्डम, फरेस्ट विलामा नेदरल्याण्डको रमणीय वातावरण छ। निम्न आधिकारिक चलचित्रले एक पटकमा तीन होटेलहरूको परिचय दिन्छ।
यदि तपाईं यी होटलहरूमा रहनको लागि समय किन्न सक्नुहुन्न भने होटलको रेष्टुरेन्टहरू र क्याफेहरूमा सुन्दर समयको प्रयास गर्नुहोस्। हुइस टेन बॉशको पूर्ण आनन्द लिनको लागि, तपाईंले लगनशील भई कार्य गर्नबाट अलग रहनु पर्छ। सहज रूपमा रहँदा, तपाईं नेदरल्याण्ड्सको जनताको लालित्य पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
२. रोशनीको मजा लिनुहोस्
यदि तपाईं ह्विस टेन बॉशको पूर्ण आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले रातमा हुने विभिन्न प्रकाशहरू देख्नुपर्दछ। दिनको समयमा, जापानीजको प्रदर्शन केही ह्युस टेन बॉशमा पनि स्पष्ट छ। तर बेलुका ह्युस्टन बाश पर्याप्त डच शहर हुनेछ। अचम्मको प्रकाश कार्यक्रम विशाल शहर मा आयोजित छन्।
तलको भिडियोमा देखिएझैं, सुन्दर प्रकाशले उच्च टेक प्रयोगको साथ हुइस टेन बॉशको शहरलाई रंगाउँदछ।
The. विशाल फूल बगैचामा हेर्नुहोस्
ह्विस टेन बॉशको फराकिलो बगैचा छ। ट्यूलिप्स फेब्रुअरी बीच देखि अप्रिल को बीचमा फूल्नेछ। गुलाब अप्रिल को अन्त्यदेखि जुन को शुरु सम्म फूल्नेछ। जुनमा हाइड्रेंजिया फल्छ। जुलाईमा लिली खिलनेछ। जुलाईको अन्तदेखि अगस्टको अन्तसम्म सूर्यफूलहरू सुन्दर हुन्छन्। सेप्टेम्बरमा नहरहरू शरद flowersतुका फूलहरूले रंगिनेछ। नोभेम्बरमा गुलाब फेरि फूल्नेछ। र जाडोमा फालानोप्सिस अर्किडहरू अद्भुत छन्। वर्षभरि, तपाईं Huisten बॉश मा फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी फूलहरूले सुन्दर शहर दृश्यलाई रंग दिन्छ।
हुइस टेन बॉशमा गतिविधि र आकर्षणको आनन्द लिनुहोस्
माथिको हुइस टेन बॉसको सब भन्दा रमाइलो अंश हो। यद्यपि, हालसालै हुइस टेन बॉशसँग अद्वितीय गतिविधिहरूको अनुभव लिनका लागि थप सेवाहरू छन्। नयाँ आकर्षणहरू पनि एक पछि अर्को जन्मेका हुन्छन्। तपाईं यी आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, हुइस टेन बॉश धेरै व्यापक छ, त्यसैले कुन गतिविधिहरू र आकर्षणहरू तपाईं सर्वप्रथम अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गरौं। अन्यथा, तपाईं लामो समयसम्म हिँडेर थाक्नुहुनेछ।
सत्य भन्नुपर्दा, टोकियो डिस्ने रिसोर्ट र युनिभर्सल स्टुडियो जापानको तुलनामा ह्विस्टेन बोस अझै विकासको प्रक्रियामा छ। ह्विस्टेन बॉशलाई मन नपर्नेहरू मध्ये धेरै मानिसहरू त्यहाँ छन् जो केवल माथिको सुन्दर शहर दृश्यको चुपचाप चुपचाप चुपचाप बिना धेरै आकर्षणको वरिपरि हिंड्छन्। कृपया सावधान रहनुहोस्।
हुइस टेन बॉशको गतिविधि र आकर्षणहरू मध्ये, म निम्न सिफारिस गर्दछु।
विशाल हुइस टेन बॉश परिसरमा, त्यहाँ canal किलोमिटर लम्बाइ रहेको नहर छ। तपाईं यस नहरलाई क्लासिक डु boat्गामा क्रुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं वरिपरि ह्युस टेन बॉशको सुन्दर शहर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ह्विस्टन बॉशको सबै बाटोमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं थाक्नुहुनेछ, त्यसैले म तपाईंलाई सुझाव दिन्छु यो क्रूज लिनुहोस् र सम्पूर्ण ह्विस्टेन बॉश समात्नुहोस् र कुन आकर्षणमा जानुपर्ने हो निर्णय गर्नुहोस्।
यस आकर्षण मा, तपाईं वास्तविकतामा असम्भव गति, भर्चुअल रियलिटी टेक्नोलोजीको साथ रोलर कोस्टर अनुभवको मजा लिन सक्नुहुन्छ। माथिको YouTube भिडियोमा, त्यो जापानी भाषामा बोलिन्छ।
विभिन्न रोबोटहरूसँग कुराकानी गरौं!
हालसालै, विभिन्न रोबोट Huisten Bos लाई प्रस्तुत गरिएको छ। आकर्षण सुविधा "रोबोट किंगडम" पनि खोलिएको थियो। इमान्दार हुनको लागि, मलाई लाग्छ कि यी आकर्षणहरूको पूर्णता अझै कम छ, तर मलाई लाग्छ कि एक पछि अर्को नयाँ रोबोटहरू अपनाउनु अद्भुत छ।
हुइस टेन बॉश बाहिर, त्यहाँ एक सीधा ohttps छ: //youtu.be/y20wH6quACkperated होटल "हेन - ना होटेरु" (अनौंठो होटल)। यहाँ रोबोटहरू होटल स्टाफको रूपमा सक्रिय छन्। यो होटल तलको भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ। यदि तपाईं रोबोटमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं यहाँ रहन कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ।
>> हुइस टेन बॉशको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ